ဖက်ရှင်နှင့်အအေးဒဏ်အတွက် C&A ဆွယ်တာအင်္ကျီများနှင့် cardigans | Bezzia
အအေးမိခြင်းမှ C & A ဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့် cardigans
Susana godoy | | ငါဘာဝတ်တာလဲ
ဆောင်း ဦး ရာသီစတင်ပြီးမကြာမီဆောင်းရာသီသည်အသွင်ပြောင်းလာလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရမယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီရိုအတွင်းရှိအချို့သောအဝတ်အစားများအပြင် C & A ဆွယ်တာအင်္ကျီများနှင့် cardigans သူတို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ အအေးမိခြင်းမှနွေးထွေးစေရန်စိတ်ကူးများ။
ဆွယ်တာအင်္ကျီများနှင့် cardigans နှစ် ဦး စလုံးကြီးစွာသောအင်အားနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောစတိုင်နှင့်အတူသင်တန်းကျွန်တော်တို့ကိုလာကြ၏။ အရောင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသောစတိုင်ကျကျခံစားခွင့်ပြုသည့်အထူးအကြံဥာဏ်များ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ အလုပ်နှင့်မလွှဲမရှောင်ချိန်းနှစ် ဦး စလုံးအဘို့အပေါင်းစပ် ကျွန်တော်တစ်ပတ်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိသည်။ ဘယ်ဟာကိုပိုကြိုက်သလဲ။
1 C&A မှ Jump နှင့် Cardigans များ
3 စတိုင် cardigans
C&A မှ Jump နှင့် Cardigans များ
ကုမ္ပဏီအမြဲခေတ်မီမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်အနည်းငယ်ထူးခြားမှုရှိနိုင်သည်ကိုငါတို့သိသည် အဝတ်အစားအမျိုးအစား။ သို့သော်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့သောအကြံဥာဏ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုထက် ပို၍ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပုံစံများအပြင်အရောင်များသည်ဤကဲ့သို့သောအဝတ်အထည်များကိုအပြီးသတ်ရန်အခြေခံကျသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ထပ်အရာလည်းရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဈေးနှုန်းကဒီထည်နဲ့အတူတက်သွားတာမှန်ပေမယ့်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအဝတ်အထည်တစ်ခုပါ။
ဒါကနှစ်ခုအတွက်တစ်ခုပါ။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖက်ရှင်နှင့်အခြားဖက်ရှင်များတွင်အမြဲတမ်းအင်္ကျီအချို့ရှိသည်၊ စျေးနှုန်းတစ်ခုတည်းသာမကနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဝတ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစျေးနှုန်းများရှိသည်။ တဖကျတှငျ, အ ဆင်စွယ်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်အရောင် ဒီရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်တစ်ယောက်ပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုအရိပ်အမျိုးမျိုးတွင်ပေါင်းစပ်။ သင်နှင့်အချို့ဝတ်ဆင်လျှင်အေးမြသောပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ဘောင်းဘီအလွတ်။ လည်ပင်းလိပ်က ပို၍ ပင်နွေးထွေးသောထိတွေ့မှုကိုရရှိသည်။ မထင်ဘူးလား
ဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး ဆွယ်တာရှည်များ သူတို့ကအစစတိုင် mark သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အခြားဖြစ်ကြ၏။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းအပြင်၎င်းသည်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သောလည်ပင်းရှိသည်။ ယင်း၏ထည်သည်ငွေသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကြော့ရှင်းသည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသီးသန့်ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။ နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ငါတို့အတွက်နည်းနည်းပေးရမယ်ဆိုရင်တောင်ယူရို ၇၉.၉၀ ထက်မပိုဘဲဘာမှထပ်မပေးပါနဲ့!
သင်တစ်ဦးချင်လျှင် အရောင်များနှင့်စတိုင်ပေါင်းစပ်ဒီဆွယ်တာနဲ့တူတယ်။ အခြေခံအရောင်များကိုတပ်ဆင်ထားပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှအခြေခံနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်တော်သည်တင်းကျပ်သောဘောင်းဘီနှင့်ရောအခြားပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတိုင်လ်နှင့်ပါပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ၁၅ ယူရိုထက်နည်းရင်တော့သင့်မှာရှိနိုင်ပါတယ်။
cardigans သည်သူတို့ဝေးနောက်ကွယ်မှမရှိကြပေ။ သူတို့ကအများကြီးပိုအဆင်ပြေခြင်းနှင့်မူရင်းစတိုင်မှတ်သားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အထက်ပါမဆိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်မယ့်ကြည့်။ နွေးထွေးမှုရစေမယ့်နည်းလမ်း၊ The အခြေခံနှင့်အနက်ရောင် cardigan ၎င်းသည်အများဆုံးတောင်းဆိုသောအကြံဥာဏ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကို lycra ဆင်မြန်းမှုများသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပိုပြီးတရားဝင်ပုံစံတစ်ခုအတွက်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ အမဲရောင်ကိုအညိုရောင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းကအမြဲတမ်းခြားနားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ တကယ်တော့, ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်မှုနှင့်အတူသင်အမြဲဂျပိန်ဘောင်းဘီအဖြစ်အချို့နှင့်အတူကအတူလိုက်ပါနိုင်ပါတယ် တရားရုံးဖိနပ်အချို့ဖနောင့်နှင့်အတူ။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ကအမြဲစိတ်ပျက်သို့မဟုတ်စတိုင်ထဲကသွားဘယ်တော့မှသောသူတို့အားဂန္ထဝင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကအဖြူရောင်အင်္ကျီနှင့်အတူအစဉ်အမြဲလိုက်ပါနိုင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်အချို့အရောင် add ရန်။ ငါတို့သည်လည်းအစိမ်းရောင်အရောင် brushstrokes နှင့်အတူဝံ့သွားကြသည်။ သူနှင့်အတူအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်ကဲ့သို့သောအခြေခံအဝတ်အစားများကိုသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ရန်စုံလင်ခြင်းထက်ပိုပြီးတစ် ဦး က cardigan ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်စကတ်နှစ်ခုလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ သင်နှင့်သင့်စတိုင်လ်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးကိုသာသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ပုံ » ငါဘာဝတ်တာလဲ » အအေးမိခြင်းမှ C & A ဆွယ်တာအင်္ကျီနှင့် cardigans